Football Khabar » नयाँ वर्षको पहिलो खेलमा रियल मड्रिडको शानदार जित : उक्लियो शीर्ष स्थानमा
नयाँ वर्षको पहिलो खेलमा रियल मड्रिडको शानदार जित : उक्लियो शीर्ष स्थानमा
स्पेनिस ला लिगा फुटलबमा रियल मड्रिडले नयाँ वर्ष २०२० को पहिलो खेलमा शानदार जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको लिगको १९औं खेलमा गेटाफेलाई ०–३ ले हराउँदै रियलले जितसहित नयाँ वर्षको सुरुआत गरेको हो ।
अवे मैदानमा रियलले जित्ने निकाल्नेक्रममा १ गोल उपहारमा पायो भने दोस्रो हाफमा २ गोल हान्यो । रियलले खेलको ३४औं मिनेटमा उपहार गोलको मदतमा खेलमा अग्रता लिएको थियो । बक्समा रियलका डिफेन्डर राफाएल भारानेको हेडिङ बल क्लियर गर्नेक्रममा गेटाफेका गोलकिपरले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका थिए । सो गोलमा भारानेको भूमिका रह्यो ।
त्यसपछि खेलको ५३औं मिनेटमा रियलका लागि भारानेले सुन्दर हेडिङ गोल गरे । टोनी क्रुसको फ्रि किकमा बक्समा रहेका भारानले हेडिङमार्फत् बललाई जाली चुमाएका थिए । सो गोललाई भिएआरले मान्यता दिएको थियो ।
त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा लुका मोड्रिकले गोल गरे । सब्सिच्युट खेलाडी फेडे भाल्भर्डेको पासमा उनले गोल गरेका थिए । सो बल भाल्भर्डे आफैंले हान्न सक्ने भए पनि गोल निश्चित गर्न उनले निःस्वार्थी हुँदै बल मोड्रिकलाई पास दिए, जसमा मोड्रिकले गोल गरे । सो गोलपछि खेल रियलले ०–३ ले जित्यो ।
यस खेलमा रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोर्टुवाको प्रदर्शन शानदार रह्यो । खेलको म्यान अफ् दि म्याच बनेका उनले पहिलो हाफमा चार कडा प्रहारमा शानदार बचाउ गरेका थिए । दोस्रो हाफमा भने उति व्यस्त हुनु परेन । पहिलो हाफमा गेटाफेले रियलविरुद्ध चर्को दबाब दिएको थियो ।
अब यो जितसँगै रियलले १९ खेलबाट ४० अंक जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा चढेको छ । उसले एक खेल कम खेलेको बार्सिलोनलाई १ अंकले पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा चढेको हो । आजै राति बार्सिलोनाले आफ्नो १९औं खेल इस्पान्योलसँग खेल्दैछ । यदि सो खेल जिते वा बराबरी गरे पनि बार्सिलोना पुनः लिगको शीर्ष स्थानमै चढ्नेछ । यता, पराजित गेटाफे ३० अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १९ पुष २०७६, शनिबार २२:४०
च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा रियल मड्रिडको नमिठो हार !
घरेलु मैदानमा रियल मड्रिड शाख्तरसँग पहिलो हाफमै ०–३ ले पछि !
मिलानका हाकिमीलाई कोरोना संक्रमण : च्याम्पियन्स लिग गुमाउने
पिके ३७ वर्षसम्म बार्सिलोनामै : क्लबद्वारा ४ खेलाडीसँग नयाँ सम्झौता
‘रोनाल्डोलाई रियल मड्रिडले कहिल्यै जान दिनु हुँदैनथ्यो’
‘इएल क्लासिको’अघि रियल मड्रिडलाई डे जोङको कडा चेतावनी !
च्याम्पियन्स लिग : आज आयाक्स घरमा लिभरपुलसँग भिड्दै
मेस्सीका नाममा एकसाथ दुई रेकर्ड : रोनाल्डो पछ्याउँदै
च्याम्पियन्स लिगमा आज बार्यन र एथ्लेटिकोबीच ‘महाभिडन्त’ हुँदै
च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेल रियल मड्रिड शाख्तरसँग खेल्दै